Momba anay | Meetup Gaming Peripheraly sy Brand PC Accessories
Avelao ny tsirairay hankafy ny fahafinaretan'ny lalao.
MeeTion marika, izay natsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana aprily 2013, dia orinasa manampahaizana manokana amin'ny klavie mekanika eo anelanelan'ny avo, totozy filalaovana, ary kojakoja peripheral ho an'ny e-Sport
"Avelao ny olon-drehetra hankafy ny fahafinaretan'ny lalao" no fahitana an'i MeeTion. efa niasa mafy hanampy ireo mpilalao lalao manerantany hanatsara ny fitendry kilalao sy ny totozy. Nanangana orinasam-piaraha-miasa akaiky amin'ny faritra samihafa izahay ary nampitombo ny làlan'ny vokatra mba hahatonga ny MeeTion Product ho bebe kokoa eo an-toerana.
Izahay dia mitazona matetika ny fifandraisana amin'ireo mpilalao lalao amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ny traikefan'ny mpampiasa sy ny fitarainany momba ny lesoka amin'ny vokatra dia ny vinaninay hampivoarana vokatra vaovao. Izahay koa dia tsy mitsahatra mitady fomba vaovao hanavaozana sy hampihatra teknolojia sy akora vaovao bebe kokoa amin'ny vokatra vokarinay mba hahatsapan'ireo mpampiasa anay ny traikefa vaovao entin'ny teknolojia sy ny fitaovana vaovao faran'izay haingana.
Hatramin'ny nananganana azy, MeeTion Tech dia nitazona taham-pitomboana mahagaga eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny MeeTion Tech dia nivarotra kitendry sy totozy 2,22 tapitrisa tamin'ny 2016, fitendry ary totozy 5,6 tapitrisa tamin'ny 2017, ary kitendry sy totozy 8,36 tapitrisa tamin'ny taona 2019.
Ny sary famantarana MeeTion dia avy amin'ny "Xunzi · Emperors": matanjaka ny tantsaha nefa tsy mahay. Avy eo, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny toetrandro, ny jeografia ary ny toetoetran'ny olombelona, ​​dia afaka manao ny zavatra rehetra izy ireo. Ny foto-keviny dia ny fanomezana ny lalao tafahoatra ny toe-piainana ara-toetrandro, ara-jeografika ary ny olombelona hananganana fotokevitra misokatra, mirakitra, miara-miasa ary mandresy. Tamin'ny 15 martsa 2016, nanao fanavaozana stratejika ny ekisista ny MeeTion, ka nampiroborobo ny fananganana lalao eco ivelan'ny e-lalao miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria.
Manolo-tena izahay hamokatra vokatra kalitao tsara indrindra amin'ny vidin'ny fifaninanana indrindra. Noho izany dia manasa am-pahatsorana ireo orinasa liana rehetra izahay hifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Adiresy: Building 2, Hengchangrong High-tech Park, Huangtian, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.